साना काम कुराहरूको महत्व – tistung deurali
साना काम कुराहरूको महत्व
Posted on November 11, 2015 November 11, 2015 by tistung
२ चैत्र २०७० को नेपाल साप्ताहिक बाट
लोकतन्त्रको मर्म ठूलो, केन्द्र र भरोसा होइन कि सानो, वितरण र जिम्मेवारी हो। नायक होइन, साधारण हो, प्रचण्डता होइन, संयमता हो, प्राधिकारी होइन, विधिसम्मत हो र शक्तिशाली होइन, सीमितता स्वीकार गर्ने हो।
हाम्रो चाहना पीडाबाट छुटकारा पाई स्थायित्व, विकास र लोकतान्त्रिक पद्धतितर्फको यात्रा हो। लोकतन्त्रले बिस्तारै परिणामहरू दिँदै गर्दा हामीले यसलाई अवरुद्ध गर्‍यौँ। हामीलाई चाहिएको नयाँ व्यवस्था नभएर लोकतन्त्रकै अभ्यास र सुधार हो भन्ने महसुस गर्न हामीले महत्त्वपूर्ण २० वर्ष हिंसामा गुमायौँ र धेरै क्षति भोग्यौँ। तर, के त अबको महत्त्वपूर्ण समय फेरि नयाँ नयाँ नेता र पार्टीलाई सम्पूर्ण शक्ति जिम्मा लगाउँदै, परीक्षण गर्दै, समय खर्चंदै जाने वा अरू नै तरिका अपनाउने ?
नेता र पार्टीहरू परीक्षण गर्ने धेरै तरिका छन्। हामी प्रायः साना कुरालाई महत्त्व दिँदैनौँ। त्यसकै एउटा उदाहरण राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीजस्ता ठूला पद नभई केही हुँदैन भन्ने भावना हो। वास्तवमा स्थानीय निकायहरू जीवित रहेका भए तिनमा धेरै नेता र कार्यकर्ता व्यस्त हुने थिए। आज ६ सय १ सांसद र दर्जनौँ मन्त्री हुँदा पनि अवसर पाएनौँ भनेर दुःखी हुनेहरू जिल्ला विकास सभापति, नगरका मेयर वा गाविस अध्यक्ष भएर व्यस्त भइरहेका हुन्थे। डेढ दशकमा कम्तीमा तीनवटा स्थानीय निर्वाचन सम्भव हुन्थे। र, त्यसबीच नेता र जनता दुवैले धेरै नीति र व्यक्तिको परीक्षण गर्दै सिक्ने अवसर पाउँथे। हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण अभ्यासको अवसरबाट वञ्चित गराइयो। त्यस कारण कुनै देखिने काम नगरेका र कतै परीक्षति नभएका ठूला कुरा गर्ने असक्षमहरूलाई हामीले देश हाँक्न सक्ने सबैभन्दा योग्य मानिस सम्झन पुग्यौँ र धोका खायौँ।
लोकतन्त्रमा अन्य साना काम धेरै छन्। जस्तै ः आफ्नै पार्टीमा राम्रा पद्धति बसाल्ने, जिम्मेवार प्रतिपक्ष बन्ने, संसदीय समितिहरूमार्फत सुधारहरू लागू गराउने, सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने आदि। वास्तवमा कुनै नगरपालिकामा राम्रो काम गर्ने मेयर, सामुदायिक वन राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने अगुवा वा संसद्मा विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने विधेयक तयार पार्ने सांसद, महत्त्वपूर्ण विषयमा मुद्दा हालेर सरकारलाई तह लगाउने व्यक्ति वा संसदीय समितिमार्फत भ्रष्टाचार रोक्ने नेता बढी भर पर्न योग्य हुनुपर्ने हो। तर, हामी यी साना कामलाई महत्त्वहीन ठान्छौँ। उल्टै ठूला र अमूर्त सैद्धान्तिक भाषण गर्ने तर लोकतन्त्र मास्न उद्यत रहनेहरूलाई आफ्ना उद्धारकर्ता सोच्छौँ। पर्याप्त अवसर र शक्ति नपाएर काम गर्न सकेनन् भनेर तिनैलाई बढी शक्तिशाली बनाउन इच्छुक रहन्छौँ। तर, साना र आधारभूत महत्त्वका काम गर्ने तरिकालाई बेवास्ता गर्छौं। हामीले चाहेको खुसी सायद यही सानो आचरण र मनस्थितिको परविर्तनबाट सुरु हुन सक्छ, न कि व्यवस्था परविर्तन वा सम्पूर्ण राज्यशक्ति हस्तान्तरणबाट।
← #IndiaBlockadesNepal: A tale of illiberal politics that spans two countries
नेपाललाई खेलकुदको पाठ →
Follow tistung deurali on WordPress.com
मेरो ब्लगमा स्वागत छ।
यस ब्लगमा म अरुलाई पनि उपयोगि हुनसक्ने आफ्ना व्यक्तिगत विचार र भोगाईहरु लेख्ने प्रयास गर्नेछु। यहाँ नेपालसम्बन्धि विषयहरु बारे लेख्ने मेरो योजना छ।
ट्विटरमा म @tistung हुँ ।
शिशु राष्ट्रको पीडा – सौभाग्य शाह
सतहभित्र र बाहिरको नेपाली राजनीति – गणेश राज शर्मा
The Load-Shedding Conspiracy (2009 blog)
#IamWithDrKC: केसी अनसनको आँखीझ्याल: कहाँ कहाँ चुकेका छौं हामी?
नेपालले स्कटल्याण्डको जनमत संग्रहबाट के सिक्न सक्छ?